AWS Inozivisa Kutsigira kweAVX2 Mirayiridzo uye Midziyo Yemidziyo | Linux Vakapindwa muropa
AWS yakaziviswa Svondo rapfuura kuwedzerwa kwemabasa matsva ku Yako Lambda chikuva. Iwo matsva maficha akaunzwa na AWS Lambda inosanganisira rutsigiro rweiyo AVX2 yekuteedzera yakatarwa, rutsigiro rwemidziyo mifananidzo
AWS Lambda izvozvi inogona kupa mashandiro pamwe nekuchengetedza kusvika 10GB ndangariro uye 6 vCPUs (virtual processor), iyo inobvumidza vanogadzira kuti vagadzire akawanda makomputa-anoshanda mabasa kuti vawane zviwanikwa zvavanoda.
Kune avo vasingazivikanwe neAWS Lambda, iwe unofanirwa kuziva izvozvo chiitiko chinotungamirwa serverless chikuva chakapihwa neAmazon sechikamu cheako Amazon Web Services gore rinopa. Serverless komputa hazvireve kuti hakuna server. Ichi zvinoreva vagadziri havachafanirwe kunetseka nezve komputa zvido, kuchengetedza uye ndangariro, nekuti mupi wegore, AWS mune ino kesi, anozvitarisira.
Izvi zvinobvumira vanogadzira kukodha kunyorera pane kushandisa zviwanikwa. Chinangwa cheAWS Lambda, ichienzaniswa neAWS EC2 (Elastic Compute Cloud), ndechekuti zviite nyore kuvaka zvidiki pane-zvinoda kunyorera zvinopindura kuzviitiko neruzivo rutsva.
AWS Lambda inotsigira kuuraya kwakachengeteka kweanowanikwa maLinux anoitwa uchishandisa nguva yekumhanya yakatsigirwa, senge Node.js. Semuenzaniso, Haskell kodhi inogona kumhanyisa paLambda.
Container mufananidzo rutsigiro inoita kuti zvive nyore kune vashandisi vebhizinesi kushandiswa kwegadziriro inoenderana yezvishandiso zvekuchengetedza scanning, kusaina kodhi, nezvimwe. Zvakare inobvumira iyo yakakura kodhi kodhi saizi yebasa kuti iwedzerwe kusvika ku10 GB.
Iyi ficha inosvibisa mutsetse uripakati peLambda nemidziyo uye inogona kuvhiringidza, saka zvakachengeteka kutanga nekunzwisisa kuti kuita uku chii uye kusiri. Naizvozvo, cherekedza kuti chiitiko ichi hachisi kutsiva AWS ECS (Amazon Elastic Container Service) kana AWS Fargate.
Iwe haugone kumhanyisa-marefu-ehupenyu masevhisi muLambda, kodhi yako inogara yakasungwa neiyo Lambda yekukumbira pateni. Basa rekufona rinogaro sanganisirwa iwo iwo akaenzana ekureba kwenguva yemaminetsi gumi nemashanu.
Uyewo, mufananidzo wemudziyo unofanirwa kusangana neLambda Runtime API kukumbira zviitiko uye kutumira mhinduro, pamwe neyakajairwa Lambda nguva yekumhanya. Ichi chiitiko chitsva chinokutendera iwe kutumira zvirimo zveLambda basa semufananidzo wemidziyo panzvimbo yeiyo Zip faira.
Iyo zvakare inomhanya iyo yepasi mufananidzo sezvazviri, saka unogona kushandisa mufananidzo weLinux, seAlpine kana Debian, Uye zvakare, mufananidzo wepasi unogadziriswa unogona kushandiswa neiyo yakavhurwa sosi AWS Lambda Runtime Interface (RIC) mutengi inogona kushandiswa kugadzira yako yepasi mufananidzo inowirirana neLambda Runtime API.
Midziyo yemidziyo inosvika ku10GB ikozvino inogona kurongedzwa, iyo iri yepamusoro zvakanyanya kupfuura iyo 250MB muganho pakudhinda pasuru pasuru. Kunge yetsika Lambda Runtime, mudziyo wemidziyo unofanirwa kunge uine bootstrap faira inobatana neLambda Runtime API yekukumbira zviitiko nekutumira mhinduro.
Kutanga nhasi, iwe unogona kuendesa kusvika ku10GB yekurangarira yeiyo Lambda basa. Izvi zvinomiririra kuwedzera kanopfuura katatu pamusoro pemiganhu yapfuura. Basa reLambda rinogovera CPU nezvimwe zviwanikwa nenzira yakatwasuka, zvakaenzana nehuwandu hweyeuchidzo yakagadzirirwa. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona ikozvino kuwana mukana unosvika matanhatu vCPUs mune yega nguva yekumhanya, "kambani yakanyora mublog blog ichizivisa kugona kutsva kweAWS Lambda.
Izvi zvinobvumidza iwe kudoma nzvimbo yefaira rebhoti uchishandisa iyo "ENTRYPOINT" uye "CMD" parameter mune iyo Docker faira.
Iwe unogona zvakare kumisikidza dhairekitori rinoshanda uchishandisa iyo "WORKDIR" parameter uye kumisikidza nharaunda nharaunda ne "ENV" paramende. Mushure mekugadzira iyo Docker mufananidzo, iwe unofanirwa kuendesa iwo mufananidzo kuAmazon Elastic Container Registry (ECR). Pamusoro pezvo, sevhisheni yeLambda inofanirwa kupihwa mvumo inodiwa yekuzivikanwa uye yekuwana Management (IAM) yekuwana iyo repository uye kuwana mufananidzo wemudziyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » AWS Inozivisa Kutsigira kweAVX2 Mirayiridzo uye Midziyo Yemidziyo